कोरोना खोप : पहिलो चरणमा तीन लाख जनालाई, काे-काे छन् स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्राथमिकतामा ? - समय-समाचार
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहिलो चरणमा कोभिड खोप लगाउने मानिसहरुको सूची तयार गरिरहेको छ ।
मन्त्रालयले नेपालमा कोभिड खोप ल्याउने तयारीसँगै पहिलो चरणमा आउने खोप कुन समूहलाई लगाउने भनेर सूची तयार गरिरहेको छ ।
मन्त्रालयले यसअगाडिनै पत्र लेखेर स्थानीय तह, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सेना, प्रहरीलगायतलाई खोप लगाउने मानिसको सूची पठाउन भनेको थियो । त्यही सूचीका आधारमा अहिले मन्त्रालयले खोप लगाउने मानिसहरुको नाम रुजु गरिरहेको खोप शाखा प्रमुख डा. झलक गौतमले जानकारी दिए ।
डा. गौतमकाअनुसार अहिले २ लाखभन्दा बढी मानिसको सूची मन्त्रालयमा आइसकेको छ । काठमाडौं जिल्ला, सेना, प्रहरीले भने आफ्नो मानिसको सूची पठाउन बाँकी रहेको गौतमले बताए ।
सबैभन्दा बढी कोरोना प्रभावित क्षेत्र काठमाडौं उपत्यका हो । सबैभन्दा धेरै खोप पनि यहाँनै आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, सेना तथा प्रहरीहरुको संख्या पनि त्यतिकै मात्रामा हुने हुँदा पहिलो चरणमा ३ लाखले कोभिड भ्याक्सिन लगाउन पाउने गरी तयारी गरिएको गौतमले बताए । तर, यो संख्या भ्याक्सिनको उपलब्धतामा पनि आधारित हुने उनले बताए ।
मन्त्रालयले पहिलो चरणमा आउने खोपको मात्राअनुसार कति पाउने भन्ने निर्धारण हुनेछ । अहिले मन्त्रालयले ल्याउने तयारी गरेको खोपको परिमाणअनुसार भने पहिलो चरणमा तीन लाखलाई लगाउने तयारी मत्रालयले थालेको छ ।
मन्त्रालयले पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, कोरोना नियन्त्रणमा पहिलो पंक्तिमा खटिने सेना, प्रहरी र जेष्ठ नागरिकलाई खोप दिने तयारी गरेको छ । सेना र प्रहरीको हकमा कोभिड व्यवस्थापनमा खटिएकालाई मात्र खोप दिइने गौतमले बताए ।
मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुन देशको कुन भ्याक्सिन ल्याउने भन्ने टुङ्गो भने लगाइसकेको छैन । तर, फागुनभित्र भ्याक्सिन ल्याउने तयारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले भारतको सिरम कम्पनीले बनाएको ‘कोभिशिल्ड’ ल्याउने विशेष पहल गरिरहेको छ । यो भ्याक्सिन नेपालको वातावरण अनुकुल हुने र भण्डारण गर्नपनि समस्या नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले भ्याक्सिन आएपछि कहाँ र कसरी भण्डारण गर्ने भन्ने पनि तयारी गरिसकेको छ । त्यसको लागि अहिले आठ ठाउँमा खोप भण्डारण गर्न मिल्ने गरी ठाउँ तयारी भइरहेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा दुई ठाउँमा खोप भण्डारण गर्ने तयारी रहेको छ । केन्द्रीय खोप भण्डारण टेकु र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खोप भण्डारण गर्ने तयारी रहेका छ ।
त्यस्तै, उपत्यकाबाहिर विराटनगर, बुटवल, पथलैया, पोखरा, सुर्खेत र धनगढीमा भण्डारण गर्ने तयारी भइरहेको छ । भ्याक्सिन आइसकेपछि कसरी व्यवस्थापन गर्ने तथा वितरण गर्ने भन्ने विषयमा अहिले छलफल भइरहेको गौतमले जानकारी दिए ।